Ezemidlalo nokuPhepha, Ukufaneleka
I-handstand iyisici esibalulekile kokubili kwezemidlalo ginistry kanye acrobatics. Lokhu akuyona nje ukuvivinya umzimba okuhlukile, kodwa futhi nesici sokuguquguquka lapho umdlali enza enye inhlanganisela. Kungenxa yokukwazi ukuma izandla lapho ukufunda kuqala ezintweni ezithinta izingane. Kodwa-ke, naphezu kokuthi i-handlestand yindlela eyisisekelo, lokhu akuwona umsebenzi olula, ngokuvamile abagijimi bayasebenza kulo lonke umsebenzi wabo. Kuningi lokuzivocavoca okuhloswe ekuthuthukiseni ikhono lokuma ezandleni zakho.
Okokuqala, izandla zomdlali kufanele ziqine futhi ziqeqeshwe kahle, uma kungenjalo ukulimala okukhulu kungenzeka. Ngokuvamile, izingane nentsha ziyesaba ukwenza lo msebenzi. Lapha, indlela yomqeqeshi ibaluleke kakhulu, okufanele yenze umsebenzi omkhulu wokulungiselela ngaphambi kokuqala ukuqeqeshwa. Ukuqeqesha akufanele kufake ukuqeqeshwa kwezandla kuphela, kodwa futhi nemithwalo yemvelo ejwayelekile kuwo onke amaqembu omzimba. Inhloso yalolu qeqesho ukuqeqesha umgijimi ukulawula umzimba wakhe ngokugcwele. Kwezinye izimo, abafundi abaphikisanayo bayaqiniseka ukuthi ukuma ngezandla zabo kuzobahola ngaphandle kwezinkinga futhi okokuqala. Lena inkinga enkulu kakhulu, njengoba ukuzethemba ngokweqile kungaholela ekulimaleni. Umqeqeshi kufanele akhethe ukuzivocavoca okunjalo okuzokwenza ukuba azizwe engozini, ngakho-ke angethembeki ngamakhono akhe.
Ngakho, ukuqala ukuqeqesha, kufanele uqale ukuthuthukisa ukuma okulungile, futhi ufunde ukuthi ungalinganisa kanjani ibhalansi yomzimba. Ngokuvamile baqala ngokuzivocavoca okunjalo: balala phansi, bephule izandla, amahlombe kanye nezinyawo endaweni ephakeme ngamasentimitha amahlanu, nazo zonke izihluthulelo kumele zihlale ziqinile. Isikhundla somzimba simisiwe imizuzwana engu-30. Okufanayo kungenziwa futhi ulele esiswini sakho. Khona-ke ungenza umsebenzi onjalo - hlala eduze nodonga, kude nendawo yamamitha owodwa nengxenye. Unyawo olungakwesokudla ukuqhubekela phambili, ngenkathi uncike izandla zakhe phansi, izandla kufanele zibe ngubude obuseduze komunye nomunye, futhi kusukela odongeni. Manje senza i-swing eqinile ngonyawo lwesokunxele ukuze imilenze yomabili iphakame kancane phansi. Ukuphoqelela lolu hlelo, ukuguqula kuyodingeka kuqiniswe, ukuze unyawo lithinte odongeni. Emva kwalokhu kusebenza kuba yinto evamile, kungenzeka ukuthi ufeze ngokuqondile ezandleni, uhlanganise umlenze osekela esiqongweni.
Uma wenza zonke izivivinyo ozidingayo ukuze uqaphele kakhulu futhi, mhlawumbe, ungenzi lutho oluyingozi ngaphandle komqeqeshi. Isici esilandelayo ekubunzima kuyakuba ukuma ngakwesandla esisodwa, udinga ukufunda ukuthi ungadlulisela kanjani isisindo engxenyeni exhasayo, ngenkathi ugcina ibhalansi.
Muva nje, i-yoga ithandwa kakhulu futhi kufanele kuthiwe kunezihlukahluka ezihlukahlukene zomgwaqo. Ukuma ezandleni zakho (inzuzo yalolu hlelo luphakeme) kuyoba nethonya elihle empilweni yakho. Umzuzu kulezi zimo kuzokwenza ngcono ukujikeleza kwegazi ebuchosheni. Ngokusebenza okuqhubekayo, umsebenzi wezobuchopho ukwanda, inkumbulo nokunakekelwa ngcono. Konke lokhu kungenxa yokuhlinzeka ngegazi okungcono ebuchosheni. Kodwa-ke, kufanele usondele kulokhu okuvivinya ngakho konke ukunakekelwa, ikakhulukazi abantu abaphethwe yingozi yomshuwalense.
Incazelo yeqembu lezempilo "Alex Fitness" (СПБ)
Ukuzivocavoca okuphumelelayo ekuzivocavoca ezinyaweni zakho
I-Scheme yokuguqula umshini ehholo nasekhaya. Nathi ukufunda kalula
Ukuvocavoca nge-hernia yomgogodla. Yini engiyidingayo ukuze ngazi?
Ugandaganda "Uralets" futhi izici zayo
Indlela ukususa stickers kusukela amafasitela imoto?
Idivayisi 'Vitaphone': yokusetshenziswa
Cottage shizi no Pudding semolina - ukunambitheka ajwayelekile kusuka ebuntwaneni
Kuhle vibratory grinder: Uhlolojikelele, tinkhulumo, abakhiqizi kanye nokubuyekeza
"Brilint": incazelo izidakamizwa, imfundo. Analog "Brilinta"
Indlu Progressive: umculo ngekusasa
Voronezh: Square Square - yisikhumbuzo esikhulu senkazimulo yempi edolobheni
Nokubeletha dolobha abantu YaseCrimea: ukuqaliswa kohlelo e-Republic of eCrimea